अजय देवगन र आलिया भट्टले 'आरआरआर' बाट कति पैसा पाए? :: सेतोपाटी कला :: Setopati
अजय देवगन र आलिया भट्टले 'आरआरआर' बाट कति पैसा पाए?
मुम्बई, पुस २७
एसएस राजामौलीको बहुप्रतिक्षित फिल्म 'आरआरआर' भारतकै सबभन्दा महँगो फिल्म हो। साढे चार सय करोड भारूमा बनेको यो फिल्मका कलाकारको पारिश्रमिक पनि कम महँगो छैन।
आरआरआरमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका दक्षिण भारतीय अभिनेताद्वय रामचरण र एनटिआरले यो फिल्मका लागि ४५ करोड भारू जति पारिश्रमिक लिएको केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्। तर यसबारे अभिनेताद्वय र निर्देशक कसैले पनि पुष्टि गरेका छैनन्।
फिल्ममा बलिउड अभिनेता अजय देवगन र अभिनेत्री आलिया भट्ट पनि प्रमुख भूमिकामा देखिएका छन्। तर पूरा फिल्ममा उनीहरूको भूमिका समय कम छ।
बलिउड हंगामाका अनुसार फिल्ममा आलियाको भूमिका २० मिनेटभन्दा कम छ। अजयले आफ्नो ८ मिनेटको भूमिकाका लागि आरआरआर टोलीलाई जम्मा ७ सात दिनको समय दिएका थए।
यति कम समय र भूमिका भए पनि यी दुई कलाकारले एकदमै धेरै पारिश्रमिक पाएको हंगामा लेख्छ।
हंगामाले बलिउड स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ- आलियाले यो फिल्ममा छोटो भूमिकाका लागि बलिउडमा सिंगै फिल्म खेले बराबरको पारिश्रमिक पाएकी छन्। उनको भूमिका छोटो भए पनि उनी फिल्मकी मुख्य अभिनेत्री हुन्। उनले आरआरआरबाट ९ करोड भारू पारिश्रमिक लिएकी छन्।
आलिया फिल्ममा सीता पात्रको भूमिकामा छिन्।
हंगामाका अनुसार अजय देवगनले त अझै धेरै पारिश्रमिक पाएका छन्। अजयको भूमिका फिल्ममा आलियाको जति पनि छैन। फिल्मको कथा र भूमिका हेर्ने हो भने उनी यसमा 'गेस्ट अपिरियन्स' मात्र हुन्।
उनले यो फिल्मलाई सात दिन खर्चिँदा ३५ करोड भारू पारिश्रमिक लिएको हंगामाले लेखेको छ।
अजय र आलियालाई यति धेरै पैसा दिएकोबारे आरआरआर निर्माण टोलीका एक सदस्यको भनाइ उद्धृत गर्दै हंगामाले लेखेको छ, 'अजय र आलिया बलिउड र उत्तरी भारतबाट दर्शक तान्ने कलाकार हुन्। दक्षिण भारतीय फिल्मका लागि यी कलाकार राख्नु फाइदा हुन्छ। बाहुबली जस्तो ऐतिहासिक फिल्मका निर्देशक एसएस राजामौलीको फिल्म भन्नु पनि कम प्रचार हुन्थेन, तर यो काफी हुन्थेन होला।'
आरआरआर गत जनवरी ७ मा रिलिज हुने भनिए पनि कोरोनाका कारण स्थगित भएको छ। यो अब कहिले रिलिज हुन्छ भन्ने यकिन छैन।
दुईवटा फरक समयको कथा प्रस्तुत गर्ने यो सिनेमामा रामचरण तथा एनटिआर जुनियर मुख्य भूमिकामा छन्। उनीहरूसँगै आलिया भट्ट, अजय देवगन, ओलिभिया मोरिस, एलोसन दोडी, रे स्टेभन्सन लगायतको अभिनय छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २७, २०७८, १२:३८:००